သစ်ခွချစ်သူတို့ စိတ်ကြည်နူးစေဖို့နှစ်သစ်လက်ဆောင်(၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သစ်ခွချစ်သူတို့ စိတ်ကြည်နူးစေဖို့နှစ်သစ်လက်ဆောင်(၃)
သစ်ခွချစ်သူတို့ စိတ်ကြည်နူးစေဖို့နှစ်သစ်လက်ဆောင်(၃)
Posted by mandalarthu on Dec 26, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary, Photography | 13 comments
ဒီနေ့ တော့ သစ်ခွပန်းလေးတွေ ကြည့်၇င်း စိတ်ကြည်လင်ရတယ်ဆိုသူများ၊
ကြည့် ရတာ အားမ၇သေးဘူး ဆို သူများနှင့် 
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်စေဖို့ ဂေဇက် အဖွဲ့သား အားလုံးအတွက်
ေ၇ာင်စုံ ဆန်းပြား သစ်ခွလေးတွေရဲ့သဘာဝ အလှ တ၇ားတွေ ကို
ဆက်လက် ပြီး ကြည့် ရှု ခံစား နှစ်သက်ကြည်နူးနိုင်စေဖို .
နှစ်သစ်ကူး လက်ဆောင် အဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ ဂေဇက်ချစ်သူ အပေါင်း ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ ကြပါစေ။
သစ်ခွအလှမပျက်အောင် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေနော့
သစ်ခွက မြေကြီးပေါ်မှာကောစိုက်လို့ ရလားခင်ဗျ
ဓါတ်ပုံထဲက ပန်းတွေ ကို တော့ မြင်ဖူးပြီးသွားပြီ
အပြင်မှာ မြင်ရဖို့ ကတော့
ဝင်းစပါယ် မှာ ငါးဒုက္ခကြော် သွားစားရင်းနဲ့ ကြည့်ရမှာဘဲ
သစ်ခွထဲမှာ ပန်းအိုးထဲမှာမြေကြီးထည့် ပြီး စိုက်လို့ ၇ပါတယ်။အဲလို သစ်ခွပင်တွေ က ဈေးနည်းနည်းတော့ ကြီးတယ်။
တကယ်က သစ်ခွက သူ့ ရဲ့ အမြစ်တွေ ကတဆင့်လေနဲ့ ရေ ကို ၇၇င်ရှင်သန်တာမို့ အိုးနဲ့ ထည့် ပြီးလေထဲမှာဘဲ စိုက်ကြတာများတယ်။
၀င်းစံပါယ်နားမှာ လဲ သစ်ခွခြံ တခြံ ရှိပါတယ်။ ရှမ်းထမင်းစားရင်းငေးပေါ့ နော်။
ပံ(၃၊၈) ကပန်းအ၀ါရောင်လေးကို မြင်တော့ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက အချိန်ကို ပြန်သတိ၇တယ်။ ၀တ်ချင်တာက ရွှေအိုရောင်။ အရောင်တူ ပန်းက ၀ယ်မရဘူး။ ပန်းတွေတုံးတဲ့အချိန် ဆောင်တာကိုး ဘယ်ရမတုန်း။ ဖန်စီလေးတွေ ခေတ်စားနေတယ် ဖန်စီပဲပန်ပါလို့ ၀ိုင်းပြောတာတောင်မရဘူး သစ်ခွ အ၀ါပဲ ပန်မယ်ပေါ့ စိတ်ကြီးတာ။ ရန်ကုန်တမြို့လုံး မရောက်တဲ့ ပန်းခြံမရှိလေအောင် ရှာပုံတော်ဖွင့်တာ နောက်ဆုံး ပန်းပြပွဲမှာမှ သွားတွေ့တယ်။ ဒါတောင် အပွင့် ၄၀လုံး အရောင်တူမရဘူး ခပ်ဆင်ဆင်လေးတွေပဲရတယ်။ သစ်ခွ ဘယ်လောက်ကြိုက်လဲဆို နှစ်ဖက်အမျိုးတွေ အကုန်လုံး ပြောစမှတ်ပြုအောင်ကို ဖြစ်ခဲ့တာမို့ အမှတ်တရပဲ။
ဟားဟား…..မှီရဲ့ သစ်ခွဇာတ်လမ်းလေးကို သိ၇တော့ မပြုံး ဘဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်၇တယ်။
မှီရဲ့ အမှတ်တ၇ များစွာထဲ က အမှတ်တ၇လေးတခု ပေါ့ မှီေ၇..။သစ်ခွချစ်သူမှီ တစ်ယောက်
ဘ၀ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ နေ့ လေးမှာခက်ခက်ခဲခဲ ရှာပြီး ပန်ဆင်ဖြစ်သွားတာ ကို အ၇မ်းဝမ်းသာပါတယ်။
ပန်းအစစ်ကို ပန်၇တာနဲ့ အတု နဲ့ က တခြားစီဘဲနော် ….feeling က မတူဘူး။နောက် ပိုင်း လှ တဲ့ဆန်းတဲ့ သစ်ခွ လေးတွေ တွေ့ ၇င်မှီအတွက် သတိတ၇ တင်ပေးမယ်နော်။
ရောင်စုံဘောလုံး ရောင်စုံဘောလုံး (အဲလေ) ရောင်စုံသစ်ခွလေးတွေလှပဗျား
နီကီတာေ၇ ……..သစ်ခွဖြူလေးတွေမြင်ရင် အမှတ်တ၇ လေးးတွေ၇ှိခဲ့ လို့ နှစ်ခြိုက်စွာ ပြုံးလိုက်ပါနော်။ ဘ၀မှာ ဖြစ်ခဲ့ ဖူးတဲ့အလွဲလေးတွေကို ပြန်တွေးမိတိုင်း ပြုံးနိုင်တယ်ဆို၇င်
နေပျော်တဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ပါပြီ။ ရောင်စုံ သစ်ခွလေးတွေကို အပြည့် အ၀ ကြည်နူးခံစားနိုင်ပါစေ။
လှပတဲ့ေ၇ာင်စုံသစ်ခွလေးတွေကို ခံစားရင်း ဘ၀ အမောတွေ ပြေနိုင်ပါစေ။
မန္တလာသူရေ ကျွန်တော့်အိမ်မှာလဲ သစ်ခွပန်းနှစ်ပင် တွဲလောင်းချိတ်ထားတာ ၀ယ်လာတုန်းက ပွင့်တဲ့ အပွင့်တွေ ကြွေသွားပြီး ထပ်မပွင့်တော့ဘူး.. အဲဒါ ဘာလုပ်ရမလဲဟင် သိရင်ပြောပြပေးပါလား
အေရင်သီယာ တချို့အကြောင်း ဆွေးနွေးချင်မိတယ်…
တအားလှတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေအတွက် ကျေးကျေးပါနော်…
ကိုဂီရေ ……..ကို ဂီ အချိန်၇၇င် ဆွေးနွေး ကြတာပေါ့ နော်။
သစ်ခွမျိုးတွေ အကြောင်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သိပ်လဲ မသ်ိလို့ ပါ။အေ၇င်သီယာအ ကြောင်းလဲ
မန္တလာသူရေ……… ကျွန်မလဲ သစ်ခွပန်းတွေ စမ်းစိုက်ကြည့်တယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပျိုးပြီး ပွင့်လာတဲ့ပန်းကြည့်ပြီး ကြည်နူးချင်လို့လေ။ ဒါပေမယ့် အခု သေကုန်ပြီ။ နောက်အားရင် ထပ်စိုက်ဦးမယ်။ အဲဒီလို လှပတဲ့ သစ်ခွပန်းလေးတွေရအောင် ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရမလဲဆိုတာ သိရင် နည်းလမ်းလေးတွေကို ပြောပြပေးပါဦးနော်။
tt lay ရေ…….
သစ်ခွပင်လေးတွေ ကို မသေအောင် လေနဲ့ အ၇ိပ်ရတဲ့ နေရာမှာ ထားပြီးစိုက်၇ပါတယ်။နေ့ စဉ် တနေ့ တခါေ၇လောင်းပေးပါ။
သစ်ခွပန်းလေးတွေကို ပွင့် စေချင်၇င့်ပန်းပွင့် ဆေး၊ အရွက်ဆေး၊ အမြစ်ဆေး ၊ အပင်အားတိုးဆေးတွေကိုဝယ်ပြီး သူ့ ရက် ပတ်နဲ့ သူ အညွှန်း အတိုင်း လောင်းပေး၇ပါတယ်။သစ်ခွဆိုင်တွေမှာေ၇ာင်းပါတယ်။ဆေးတွေ က နဲနဲဈေးကြီးလို့အမြဲဝယ်လောင်းဖို့ အဆင် မပြေရင် တော့တွေ့ ရှိထားတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက် တခု ရှိပါတယ်။အဲဒါက…….တိုးတိုးပြောပြမယ်။ သစ်ခွဆိုင်ရှင်တွေ ကြားသွားမှာစိုးလို့ …….
အဲဒါက….တရုပ်ဗားပလက် ကို ၀ယ်ပြီး တပင် ကို တပြားစီနေ့ စဉ်ထည့် ပေးပြီး နေ့ စဉ်ေ၇လောင်းပေးပါ။ ဆေးတပြားကုန်သွား ၇င်နောက် တပြားထည့် ပေးပေါ့ ။တပြိုင်နက် အများကြီး ထည့် လို့ မ၇ပါဘူးနော်။ အဲဒါဆို၇င် နှစ်ပေါင်းများစွာ မပွင့် တဲ့ သစ်ခွပင်တောင်
ပွင့် လာပါလိမ့် မယ်။ အိမ်မှာ ကိုယ်တွေ့ နော်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပျိုးပြီး လှပစွာ ပွင့် ဖူးလာတဲ့ ပန်းကလေးကို နေ့ စဉ်ကြည့် ပြီး ကြည်နူးနိုင်ပါစေ။